IMagSafe Duo ye-iPhone kunye neApple Watch iindleko ezili-149 zeerandi | Ndisuka mac
IMagSafe Duo ye-iPhone kunye neApple yokujonga iindleko zibiza ii-euro ezingama-149
Inkampani yaseCupertino yavula le mini emini kwilizwe lethu (iSpain) ngolibaziseko ukhetho lokubhuka lweemodeli ezintsha ze-Apple iPhone 12 kunye ne-HomePod mini entsha. Ngokumangalisayo namhlanje bathathe nethuba lokongeza itshaja entsha yeMagaSafe kabini kwiwebhu. Kuyinyani ukuba abakhange bongeze umhla osemthethweni wokuthengisa kodwa bapapashe ixabiso kunye nokuhambelana kwale tshaja nezixhobo zeApple, Malunga nexabiso licacile kwisihloko senqaku kodwa ukuhambelana nomthwalo kunokukumangalisa.
Iyahambelana nokutshaja ii-AirPods kunye ne-AirPods Pro
Iindaba ziye zothuka phantse kuba akukho mntu ubelindele ukuba le ndawo yokutshaja iphindwe kabini iya kuhambelana nokuhlawuliswa kwee-AirPods zethu. Ukongeza koku, ixabiso lee-euro ezili-149 liphezulu ngandlela thile kuthi kwaye yile itshaja enolunye ukhubazeko ukongeza Ufuna iadaptha yamandla ye-USB engu-20W eyi-Apple ngokucacileyo ethengisa ngokwahlukeneyo.
Ukuba awumameli kwisiqendu sokugqibela se- # podcastApple ngekhe uyazi ukuba ndiza kuthini ngoku, kodwa ukuba ungomnye wabo basimameleyo uzokwazi ukuba isiseko asidibanisi bunzima kuba kuthathelwa ingqalelo Ukuhambahamba, kunye Kungenzeka ukuba xa uphakamisa i-iPhone uthathe iWatch okanye ii-AirPod ngenxa yeemagnethi.
Obu bunzima kufuneka buqinisekiswe ngokusesikweni kuba ekuphela kwento esiyaziyo ngokuqinisekileyo kukuba amaxabiso ayo aya kuba li-euro ezili-149 apha kwaye iya kuhambelana nokuhlawuliswa kwee-AirPods. Umhla wokukhutshwa usengumnqa ngoku esingacingi ukuba kuthatha ixesha elide ukuyibonisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » IMagSafe Duo ye-iPhone kunye neApple yokujonga iindleko zibiza ii-euro ezingama-149
Isimangalo esifakwe ngabatyali mali beApple nxamnye noTim Cook samkelwe
Ukuguqulelwa kweSafari kuqala ukuphuma ngaphandle kwe-US.